एभिन्युज टेलिभिजनदाङमा आइतवार साझ सम्म १ ह्जार बडि झाडा पखालाका विरामीहरुको उपचार - एभिन्युज टेलिभिजन
13 Jestha 2075 Sunday 5:44 pm प्रतिकृया दिनुहोस
दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा आइतवार साझ सम्म १ ह्जार बडि झाडा पखालाका विरामीहरुको उपचार भएको छ । शान्ति नगरगाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन ।
शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकी र तुलसीपुरका विभिन्न अस्पतालमा गरि हालसम्म ह्जार जतिको उपचार भएको र त्यसमध्य अधिकाँस उपचारपछि घर फर्किएको स्वास्थ्यकर्मीको हवाला दिदै अध्यक्ष डाँगीले बताए ।
त्यहाँ नेपाली सेना, राप्ती अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनश्वास्थ्य, तुलसी हस्पिटल , नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बाट खटिएको स्वास्थ्य टोली र स्थानीय स्वास्थकर्मीले उपचार गरिरहेको शान्ति नगर गाउँपालिकाका प्रवक्ता रवि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
यसैबीच शान्ति नगर स्थित स्वास्थ्य चौकीमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले भने झाडापखाला नियन्त्रण उन्मुख रहेको जानकारी दिएका छन् । तुलसी हस्पिटलका डा. किशोर खत्रीले रातदिन खटेर चिकित्सकहरुले उपचार गरेपछि झाडापखाला नियन्त्रण उन्मुख रहेको बताए ।
राप्ती अञ्चल अस्पतालमा ३० जना जति र सिटी हस्पिटलमा १० जना गरि ४० जना जति झाडा पखालाका विरामीको हाल उपचार तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको देवकोटाले बताए । अन्य विरामी थपिएमा तुलसी हस्पिटल, लाईफ कियर हिस्पटल लगाएत संग
कुरा गरिएको देवकोटाले बताए । ‘हाल सबैको निशुल्क उपचार गरिरहेका छौं ।’ अध्यक्ष देवकोटाले भने ।
शान्ति नगर गाउँपालिकामा खटिएर विरामीको उपचार गरिरहेका डा. किशोर खत्रीले दुषित पानीका कारण शान्ति नगरमा झाडा पखाला फैलिएको बताएका छन् । पानीमा सिगेला व्याक्टेरिया फेला परेको हुँदा उक्त पानीको प्रयोग गर्ने सबैजनामा भाडा पखालाको संक्रमण भएको डा. खत्रीले बताए । शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पानीकै कारण झाडा पखाला फैलिएको भन्ने जानकारी दिएपछि पानीको मुहान बन्द गरिएको बताए ।
उनले केही दिन पहिले परेको पानीले माईले पानी खानेपानी आयोजनामा खोलाको दुषित पानी मिसिएको हुँदा त्यही कारण झाडा पखाला फैलिएको बताए । उनले स्वास्थ्य चौकीमा वेड अभावले भुई तथा बरण्डा अनि छाहारीमा राखेर समेत विरामीको उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।